Beesha Caalamka Oo La Dareemayo Inay Soo Celinayso Xidhiidhkii Dabcay Ee Ay La Lahaayeen Somaliland | Saxil News Network
Beesha Caalamka Oo La Dareemayo Inay Soo Celinayso Xidhiidhkii Dabcay Ee Ay La Lahaayeen Somaliland
November 26, 2017 - Written by Abdisalaan Harir
Hargeysa(Saxilnews)Dalalka beesha caalamka ee taageera nidaamka dimuqraadiyadeed iyo horumarka Somaliland, ayaa u muuqda doorashadii ka dib inay bedelelayaan mawqifkii ay ka taagnaayeen la macaamilka dawladda Somaliland.
Dalalkan oo saaxiib la ah Somaliland kana kooban dalalka reer Yurub iyo Maraykanka, ayaa hore meel adag uga taagnaa xidhiidh iyo wada shaqayn ay la yeeshaan Somaliland, waxaanay hoos u dhigeen deeqihii ay siin jireen Somaliland iyo xidhiidhadii ay la lahaayeen, iyagoo arrintaas ku xidhiidhinayay dib u dhaca ku yimid doorashooyinkii Somaliland mudadan uu madaxweyne Siilaanyo xilka hayay.
Hase yeeshee, mawqifkii dalalkaas ayaa ka dib doorashadii waxa muuqata inuu isbedel ku imanayo aragtoodii. War-murtiyeed ay wadamadani wada jir u soo saareen waxa ay ku bogaadiyeen shacabka Somaliland, waxaanay balan qaadeen inay wada shaqayn la yeelanayaan madaxweynaha la doortay Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadiisa.
Sidoo kale warsaxafadeedyo ay dalalkani u soo saareen gooni-gooni, sida Ingiriiska, Sweden Denmark, Maraykanka iyo kuwo kale waxay balan qaadeen inay xidhiidh wada shaqayneed la yeelanayaan madaxweynaha la doortay iyo xukuumadiisa uu soo dhisi doono.
Weedhahan ay ka muuqato bilow ay dalalkani doonayaan inay dib u bilaabaan wada shaqayntii iyo kalsoonidii beesha caalamka iyo dawladda Somaliland, ayaa wuxuu rumoobi karaa oo keliya haddii madaxweynaha la doortay iyo xukuumadiisu la yimaadaan qorsheyaal cad cad oo siyaasad dibadeed ah taas oo keenaysa in beesha caalamku dib u furto xidhiidhkii ay la lahaayeen Somaliland.